येशू: प्रतिज्ञा - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
मिडिया > जर्नल फोकस फोकस > पत्रिका फोकस यीशु 2019-01 > येशू: प्रतिज्ञा
पुरानो नियमले हामीलाई बताउँछ कि हामी मानिसहरु भगवान को छवि मा बनाईएको हो। यो धेरै पहिले हामी मानव पाप र स्वर्ग बाट संचालित गरीएको थिएन। तर न्याय को वचन संग प्रतिज्ञा को एक शब्द आयो। भगवानले भन्नुभयो: "म तिमी (शैतान) र महिला र तिम्रो बीउ र उसको बीउ को बीच दुश्मनी राख्नेछु; उहाँ (येशू) तपाइँको टाउको कुट्नुहुनेछ र तपाइँ उसलाई (येशू) कुर्कुच्चामा हान्नुहुनेछ (उत्पत्ति ३:१५)। हव्वाको सन्तानको एक उद्धारकर्ता मानिसहरुलाई बचाउन आउनेछन्।
दृष्टिमा कुनै समाधान छैन
इभा सायद आशा गर्छिन् कि उनको पहिलो बच्चा समाधान हुन्छ। तर कयिन समस्याको एक हिस्सा थियो। पाप फैलियो र यो झन झन खराब हुँदै गयो। नूहको समयमा आंशिक छुटकारा थियो, तर पाप जारी नै रह्यो। त्यहाँ नूहको नाति र त्यसपछि बेबिलोनको पाप थियो। मानवता समस्याहरु मा जारी छ र केहि राम्रो आशा को लागी, तर यो कहिल्यै प्राप्त गर्न सकेन।
अब्राहमलाई केहि महत्वपूर्ण वाचाहरू गरियो। तर सबै प्रतिज्ञाहरू प्राप्त गर्नु अघि उहाँ मर्नुभयो। उनको बच्चा थियो तर कुनै देश थिएन र उनी सबै राष्ट्रहरूका लागि आशिष्‌ थिएनन्। प्रतिज्ञा इसहाक र पछि याकूबलाई दिइयो। याकूब र उसको परिवार मिस्रमा आए र एउटा ठूलो जाति भयो, तर तिनीहरू दास बने। तैपनि, परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्नुभयो। परमेश्वरले उनीहरूलाई मिश्रबाट बाहिर ल्याउनुभयो आश्चर्यजनक चमत्कारहरू सहित। इस्रायलका राष्ट्रहरू यस वाचामा पछाडि पसे। चमत्कारीहरूले केहि कानूनको पालना जत्तिकै सहयोग गरेन। तिनीहरूले पाप गरे, शted्का गरे, 40० वर्षसम्म उजाडस्थानमा हिडे। परमेश्वर आफ्नो वचनअनुरूप रहनुभयो र मानिसहरूलाई कनान भूमिमा ल्याउनुभयो र धेरै चमत्कारहरूद्वारा उनीहरूलाई त्यो देश दिनुभयो।
तिनीहरू अझै पापी मानिसहरू थिए, र न्यायाधीशको पुस्तकले हामीलाई मानिसहरूका कतिपय पापहरू देखाउँदछ, किनकि यो मूर्तिपूजामा पर्दै गयो। तिनीहरू अरू राष्ट्रहरूका लागि कसरी आशिष्‌ हुन सक्थे? अन्तमा, इस्राएलको उत्तरी जनजातिहरूलाई अश्शूरीहरूले कैदमा लगे। तपाईंलाई लाग्छ कि त्यसले यहूदीहरूलाई पछाडि फर्काउने थियो, तर त्यसो भएन।
धेरै वर्षसम्म यहूदीहरूलाई बेबिलोनमा कैदी बनाएर परमेश्वरले यहूदीहरूलाई छोड्नुभयो र उनीहरूमध्ये थोरै मात्र यरूशलेम पछाडि फर्के। यहूदी राष्ट्र आफ्नो पुरानो आत्मको छाया बने। उनीहरू प्रतिज्ञा गरिएको भूमिमा इजिप्ट वा बेबिलोनभन्दा राम्रो थिएनन्। तिनीहरू कराए: परमेश्वरले अब्राहमलाई गर्नुभएको प्रतिज्ञा कहाँ छ? हामी अन्य देशहरूका निम्ति कसरी ज्योति हुनेछौं? यदि हामी आफैंलाई काबूमा राख्न सक्दैनौ भने, दाऊदले गरेका प्रतिज्ञाहरू कसरी पूरा हुनेछन्?
रोमी शासनको अधीनमा मानिसहरू निराश थिए। कसै-कसैले आशा छाडे। केही भूमिगत प्रतिरोध आन्दोलनमा सामेल भए। अरूले अझ बढी धार्मिक हुन खोजे र परमेश्वरको आशिषको कदर गरे।
भगवान विवाह बाट बाहिर जन्मेको बच्चा संग आफ्नो प्रतिज्ञा राख्न शुरू गर्नुभयो। "हेर, एक कुमारी बच्चा संग हुनेछन् र एउटा छोरालाई जन्म दिनेछन्, र उनीहरुले उसलाई इम्मानुएल नाम दिनेछन्, जसको अर्थ अनुवादमा छ: भगवान हाम्रो साथमा" (मत्ती १:२३) उहाँलाई पहिले येशू भनियो - हिब्रू नाम संग "YESHUA", यसको मतलब भगवानले हामीलाई बचाउनुहुनेछ।
एन्जल्सले गोठालाहरुलाई भने कि एक मुक्तिदाता बेथलेहेममा जन्मेको थियो (लूका २:११)। उहाँ मुक्तिदाता हुनुहुन्थ्यो, तर उसले त्यो क्षणमा कसैलाई बचाएन। उनी आफैंलाई बचाउनुपरेको थियो, किनकि परिवारले बच्चालाई हेरोद, यहूदीहरुका राजाबाट बचाउन भाग्नु परेको थियो।
परमेश्वर हामीतर्फ आउनुभयो किनकि उहाँ आफ्ना प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्नुभयो र हाम्रा सबै आशाहरूको आधार हुनुहुन्छ। इजरायलको इतिहासले बारम्बार देखाउँदछ कि मानव तरिकाले काम गर्दैन। हामी आफैले परमेश्वरको उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न सक्दैनौं। परमेश्वर सानो सुरुआत, शारीरिक बलको सट्टा मानसिकको, शक्तिको सट्टा कमजोरीमा विजयको सोच्नुहुन्छ।
जब परमेश्वरले हामीलाई येशू दिनुभयो, उहाँले आफ्ना प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्नुभयो र आफूले भविष्यवाणी गरेका सबै ल्याउनुभयो।
हामीलाई थाहा छ कि येशू हाम्रो पापहरूको निम्ति फिरौतीको रूपमा आफ्नो जीवन दिनको लागि हुर्कनुभयो। उहाँ हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ र संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। ऊ शैतान र मृत्युलाई हराउन आएको छ उसको मृत्यु र पुनरुत्थान पछि उसलाई पराजित गरेर। हामी कसरी परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्न सक्छौं भनेर हामी देख्न सक्छौं।
हामी लगभग २,००० वर्ष पहिले यहूदीहरू भन्दा धेरै देख्न सक्छौं, तर हामी अझै सबै देख्दैनौं। हामी अहिलेसम्म प्रत्येक प्रतिज्ञा पूरा भएको देख्दैनौं। शैतानले साined्लोले बाँधिएको हामी देख्दैनौं जहाँ ऊ कसैलाई प्रलोभनमा पार्न सक्दैन। हामी सबैले परमेश्वरलाई चिन्छौं भनेर देख्न सकेनौं। हामी अझै रोइरहेका र आँसु, मर्ने र मृत्युको अन्त देख्दैनौं। हामी अझै अन्तिम जवाफ चाहान्छौं। येशूमा हामीसँग यो गर्न आशा र सुरक्षा छ।
हामीसँग एउटा प्रतिज्ञा छ जुन परमेश्वरबाट आयो, जुन उहाँको पुत्रले समर्थन गरेको थियो र पवित्र आत्माले मोहर लगाएको छ। हामी विश्वास गर्दछौं कि प्रतिज्ञा गरिएको सबै आउँनेछ र ख्रीष्टले आफूले सुरु गरेको काम पूरा गर्नुहुनेछ। हाम्रो आशा फल फलाउन थालेको छ र हामी विश्वस्त छौं कि सबै प्रतिज्ञाहरू पूरा हुनेछन्। जब हामी बच्चा येशूमा आशा र मुक्तिको आशा पाउँदछौं, हामी बौरिउठ्नुभएका येशूमा आशा र पूर्णताको आशा गर्छौं। यो परमेश्वरको राज्यको बृद्धि र प्रत्येक व्यक्तिमा भएको चर्चको कार्यमा पनि लागू हुन्छ।
आफ्नै लागि आशा
जब मानिसहरूले ख्रीष्टमा विश्वास गर्न थाल्छन्, उहाँमा तपाईंको काम बढ्न थाल्छ। येशूले भन्‍नुभयो, हामी सबै नयाँ गरी जन्‍मनुपर्‍यो। यदि हामी उहाँमाथि विश्वास गर्छौं भने पवित्र आत्माले हामीलाई ओझेलमा पार्नुहुन्छ र हामीमा नयाँ जीवन सिर्जना गर्नुहुन्छ। येशूले प्रतिज्ञा गरेझैं उहाँ हामीमा जीवन पाउनुहुनेछ। कसैले एक पटक भनेका थिए: "येशू हजारौं पटक जन्म लिन सक्नुहुन्छ र यदि उहाँ ममा जन्मनुभएन भने यो मेरो केही कामको हुँदैन"।
हामी आफैंलाई हेरेर सोच्न सक्छौं, "मैले यहाँ धेरै देखिरहेको छैन। म २० बर्ष भन्दा पहिलेभन्दा राम्रो छैन। म अझै पनि पाप, शंका र दोषी संग संघर्ष गर्दै छु। म अझै पनि स्वार्थी र जिद्दी हुँ। म भन्दा राम्रो छैन। इस्राएलका पुराना मान्छेहरू भन्दा ईश्वरभक्त व्यक्तिको रूपमा। भगवानले मेरो जीवनमा साँच्चिकै केही गर्नुभएको छ कि भनेर मलाई अचम्म लाग्छ। मैले प्रगति गरेको जस्तो देखिदैन। "
यसको जवाफ येशूलाई सम्झनु हो। हाम्रो आध्यात्मिक सुरूवात अहिले राम्रो भएको जस्तो देखिंदैन, तर यो किनभने परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ यो राम्रो छ। हामीमा के छ हामी मात्र तल भुक्तानी छ। यो एक सुरूवात हो र यो परमेश्वर आफैले ग्यारेन्टी पनि पाउनु भएको छ। हामीमा भएको पवित्र आत्माले आउनु हुने महिमाको तलको भुक्तानी गर्नुभयो।
लूकाले बताउँछ कि येशू जन्मनुहुँदा स्वर्गदूतहरूले गाए। यो विजयको क्षण हो, यद्यपि मानिसहरूले यसलाई त्यसरी देख्न सक्दैनन्। स्वर्गदूतहरूलाई थाहा थियो कि विजय निश्चित छ किनकि उनीहरूलाई परमेश्वरले भन्नुभएको थियो।
एक जना पापीले पश्चाताप गरेको खण्डमा स्वर्गदूतहरू रमाउँछन् भनेर येशूले हामीलाई भन्नुभएको छ। तिनीहरू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने हरेकको लागि गाउँछन् किनभने परमेश्वरको बच्चा जन्मेको थियो। उसले हाम्रो ख्याल राख्छ। हाम्रो आत्मिक जीवन सिद्ध नभए पनि, परमेश्वरले हामीमा काम गरिरहनुहुनेछ जबसम्म उहाँ हामीमा काम पूरा गर्नुहुन्न।
जसरी बच्चा येशूमा ठूलो आशा छ, त्यसरी नै नवजात शिशुमा पनि ठूलो आशा छ। जतिसुकै समय सम्म तपाईं इसाई भइरहनुभएको छैन, तपाईको लागि ठूलो आशा छ किनकि परमेश्वरले तपाईमा लगानी गर्नुभयो। उसले सुरु गरेको काम छोड्दैन। येशू प्रमाणित हुनुहुन्छ कि परमेश्वर सधैं आफ्ना प्रतिज्ञाहरू गर्नुहुन्छ।